संसदभित्र कसले भित्र्यायो ६४ करोड विदेशी पैसा ? रातोपिरो भए कर्मचारी - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
संसदभित्र कसले भित्र्यायो ६४ करोड विदेशी पैसा ? रातोपिरो भए कर्मचारी
प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार
काठमाडौं । संसदमा दाताको प्रभाव निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका वेला संसद् सचिवालयले सांसदहरूको सशक्तीकरणका लागि भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)बाट झन्डै ६४ करोड रुपैयाँ सहयोग लिने सम्झौता गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ । संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई र युएनडिपीका प्रतिनिधि रेनउड मेएरबीच ५९ लाख १५ हजार २ सय ५७ अमेरिकी डलर (६३ करोड ८८ लाख ४७ हजार नेपाली रुपैयाँ) सहयोगको सम्झौता भएको हो ।
१० वैशाखमा भएको उक्त सम्झौताबारे अधिकांश सांसद मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासमेत अनविज्ञ छन् । ‘हामी ९सभामुख र अध्यक्ष० आइसकेपछि युएनडिपीसँग सम्झौता भएको छैन । तपाईंले भनेर थाहा भयो । म भोलि बुझ्नेछु,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले विशेष समय लिँदै युएनडिपीको सहयोग सम्झौताबारे बोले । उनले आफूहरूको नाममा सचिवालयले युएनडिपीबाट करोडौँ रुपैयाँ लिने सहमति गर्दा पनि जानकारी नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘सांसदको नाम भजाएर दातृनिकायको बजेटबाट करोडौँ रुपैयाँ लिने र खर्च हुने काम हुँदोरहेछ । यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन । नीति निर्माण गर्ने संसद्जस्तो गरिमामय संस्थामा यो गतिविधि आपत्तिजनक छ,’ उनले भने ।
गत हप्ता संघीय संसद् सचिवालयले युएनडिपीकै अनुदानमा सांसदहरूलाई दुईदिने तालिम दिएको थियो । यो समाचार मिडिामा आएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले संसद् सचिवालयले आफ्नै खर्चमा तालिम आयोजना गरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।
दुईदिने प्रशिक्षणमा केही सांसदले दातृनिकायको पैसाले तालिम आयोजना भएको भन्दै बहिष्कार गरेका थिए । तर, सभामुख र अध्यक्षले ढाकछोप गरेपछि युएनडिपीले नयाँ बानेश्वरस्थित ‘अल्फा हाउस’बाट सांसदहरूका लागि सम्पूर्ण खानपिनको व्यवस्थासहित दुईदिने तालिम भएको थियो ।
नख्खु बम विस्फोटमा संलग्न भएको आरोपमा विप्लवका पूर्व अंगरक्षक पक्राउ
काठमाडौं । ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा भएको बमकाण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले विप्लव […]
नेपालकाे अडान: विश्वव्यापी रुपमै मृत्युदण्ड अन्त्य हुनपर्छ
काठमाडौं । नेपालले विश्वव्यापी रुपमा नै मृत्युदण्ड अन्त्य हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्या‍एको छ । संयुक्त […]
नेकपामा विवाद : समानान्तर प्रतिवेदन बुझाएपछि विवादित,एकता लम्बिनुमा ४ कारण
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाको पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिनुमा ४ वटा कारण रहेको खुलेको छ। एकता प्रक्रिया […]
गृहमन्त्री थापाको एक बर्ष : महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेकै हुन् ?
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले गएको एक वर्ष संरचनागत सुधार र शान्तिसुरक्षा तथा सुशासनको आधार वर्षका रुपमा […]
अबको बजेटबाट बृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्‍याइन्छ- प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको बजेटमा वृद्धभत्ता पाँच […]
नख्खु बम काण्ड : मृतककाे परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने विप्लव पार्टीकाे घाेषणा
काठमाडौं । शुक्रबार साँझ ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलकाे मुख्यालयमा भएको बम बिस्फोटनमा परि ज्यान गुमेका मृतकका […]
अब २४ घण्टामै स्मार्ट लाइसेन्स,क-कसले पाउँछन् ? (सूचना सहित)
खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा दुईजनाको मृत्यु
नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर,दक्ष जनशक्तिलाई अवसर,प्रक्रिया कोरिया मोडलमै
मौसम बदली: मेघ गर्जन सहित पर्ने ,हिमाली भेगका हिमपातको सम्भावना
जर्मनीले रोमाञ्चक जित निकाल्दा, बेल्जियम र पोल्याण्डको पनि शानदार प्रदर्शन